Ambongadiny Chandelier PC-207 Metal Fabric Light Engineering Chandelier Art Chandelier mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Style: loharano mazava avaratra
Ny mari-pana amin'ny lokon'ny K: 3000K
Fitaovana lehibe an'ny vatana jiro: vy
Fitaovana lehibe amin'ny jiro: lamba
Karazan-kazo hazavana: jiro mampirehitra
Isan'ny loharanom-pahazavana LED: 8
Chandelier Art Chandelier Art Fitaovana Fahazavana
Asongadino ny hatsaran'ny efitranonao amin'ny Furstenberg Chandelier mahafinaritra. Ity jiro miavaka amin'ny vy tsy misy fangarony ity dia manana endrika maoderina misy tsipika madio sy sisiny maranitra. Ny volon-tsavony mahitsizoro dia manalefaka ary manaparitaka tsara ny jiro manerana ny efitrano.
Miaraka amin'ny jiro tsirairay 12 entina amin'ny ambaratonga roa, Chandelier Bergerac dia hanampy hafanana sy hatsarana amin'ny haingon-trano anatiny. Mampiseho endrika volavola nentim-paharazana feno fahasahiana miaraka amina tsipika mahafinaritra amin'ny famaranana varahina tranainy iray, miaraka amina kanto amin'ny lokon'ny fotsy fotsy miaraka amina firavaka volamena sy volamena.
Ity chandelier volamena ity dia voadio sy kanto, manome endrika vaovao ny tranonao. Ny jiro dia manana fiolahana kanto, ity jiro valin-drihana ity dia misy fefy misy tsipiriany mihodina. Ity chandelier ity dia feno halemem-panahy sy hatsaran-tarehy. Ny tsangambaton'ny Victoria dia voaravaka lamina rantsana. Ny firafitra tsotra sy kanto dia mamorona hazavana sy alokaloka mahavariana
Teo aloha: Glass glass art chandelier toetra chandelier tsotra chandelierChandelier PC305
Manaraka: Chandelier PC-215 toetra vaovao jiro metaly fanaovan-jiro chandelier Chandelier Chandelier
Chandelier PC-8278 lamaody Nordic mitete chandeli ...
Chandeliers SPWS-C021 aingam-panahy avy amin'ny tsy ...
Chandelier PC-8230 Light chandel kristaly marevaka ...
Chandeliers SPWS-C016 Manokana zavakanto fitaratra ...
Chandelier PC-8297 Personalized kristaly lightin ...